Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo su’aalo weydiiyay wasiiradda Caafimadka – Kalfadhi
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo su’aalo weydiiyay wasiiradda Caafimadka
Ajendaha kulanka guud ee Golaha Shacabka waxa uu ahaa su’aal oraaheed ku abaaran Wasiirka Caafimaadka iyo horumarinta Adeega Bulshada Drs Fowziya Abuukar Nuur.
Kulanka waxaa shir guddoominaayo guddomiye ku xigeenka kowaad ee Galaha Shacabka Mudane Cabdiweli Ibraahim Shiekh Muudeey, sidoo kale waxaa kulanka goob joog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Marwo Foosiya Abiikar Nuur oo shalay hortagtay Xildhibaanada golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa su’aalihii la weydiiyay ka jawaabtay, inkasta oo qaar kamid ah xildhibaannada ay ku doodeen in aysan ku qancin jawaabaha.
Wasiirka Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Xamza Saciid Xamza ayaa shalay ka baaqday kulankii, waxaana la sheegay in kulamada kale uu hor imaan doono golaha.
Qaar kamid ah Xildhibaanada ayaa sheegay in si siman aan loogu gurman dhamaan dadkii ay saameeyeen Fatahaadaha wabiyada iyo sidoo kale in dowladda aysan usii diyaar garoobin ka jawaabida masiibooyinka dalka ka dhaca.
Wasiirka Caafimaadka Somaliya, Marwo Foosiya Abiikar Nuur, ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay shaqada Wasaaradeeda iyo sida ay ula socoto tayada daawooyinka dalka la keeno.
Xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi ‘’Cali Afgooye’’ oo ka mid ah Xildhibaanadda golaha golaha hor geeyay Motion-ka ama soo jeedinta wasiirka loogu yeeray ayaa golaha ka hor sheegay inuusan ku qancin qaabka wasiirka ay uga jawaabtay su’aalihii qoraal ahaan loogu gudbiyay.